Ukwahlukana phakathi kobuthatho bonke, i-Authoritarianism, iFascism
Imbali kunye neNkcubeko Ngekhulu lama-20
I-Totalitarianism, Authoritarianism, kunye neFascism
I-Totalitarianism, ubugunyazi, kunye ne-fascism ziintlobo zonke zikaRhulumente. Kwaye ukuchaza iindlela ezahlukeneyo zoorhulumente akulula njengoko kubonakala ngathi.
Oorhulumente bezo zonke iintlanga banefom esemthethweni njengoko ichongiwe kwi-World Factbook ye-World Central Intelligence Agency. Nangona kunjalo, inkcazo yesizwe yendlela yawo karhulumente inokuhlala iphantsi kweenjongo. Ngokomzekelo, ngelixa i-former Soviet Union yabhengeza intando yesininzi, ukhetho lwayo aluzange "lukhululekile kwaye lulungele" njengoko elinye iqela labaviwa abavunywe nguRhulumente belimele.
I-USSR ichaneke ngokuchanekileyo njengeriphablikhi yenzululwazi.
Ukongezelela, imida phakathi kweendlela ezahlukeneyo zorhulumente inokusetyenziswa ngamanzi okanye ichazwe kakuhle, ngokuqhelekileyo ngeziganeko ezigqithisiweyo. Leyo yimeko ye-totalitarianism, igunya lobugunyazi kunye ne-fascism.
I-Totalitarianism yindlela yokarhulumente apho amandla karhulumente angenamkhawulo kwaye isetyenziselwa ukulawula malunga nayo yonke imiba yobomi buntu noluntu. Olu lawulo luya kwiindaba zonke zezopolitiko nezemali, kunye nezimo zengqondo, ukuziphatha kunye neenkolelo zabantu.
Iingcamango zobudlelwane bezizwe zaveliswa ngowe-1920 yi-fascists yaseItaly ezazama ukubeka ithuba elifanelekileyo ngokubhekiselele kwinto ababecinga ngayo "iinjongo ezilungileyo" kuluntu. Nangona kunjalo, ezininzi iinkcubeko zaseNtshona kunye noorhulumente bawagatya ngokukhawuleza ingcamango ye-totalitarianism kwaye baqhubeka bekwenza namhlanje.
Enye into ehlukeneyo yoorhulumente wobumbano kukuba ubukho beengcamango ezicacileyo okanye ezicacileyo zesizwe, isiseko seenkolelo ezenzelwe ukunika intsingiselo kunye nolwalathiso kuluntu lonke.
Ngokweengcali zembali yaseRashiya kunye nomlobi uRichard Pipes, uNdunankulu wase-Italy waseFascist uBenito Mussolini ushicilele isiseko sobubodwa njengokuba, "Konke ngaphakathi kwiphondo, akukho nto ngaphandle kwelizwe, akukho nto ichasene nombuso."
Imizekelo yeempawu ezinokuthi zibekho kwilizwe eliqhelekileyo ziquka:
Umgaqo ogqityiwe ngumlawuli omnye
Ubukho beqela elilawulayo lepolitiki
Ukunyanzeliswa ngokukhawulezileyo, ukuba akuyikulawula ngokupheleleyo umshicileli
Ukusasazwa rhoqo kwenkqubo yepropaganda
Inkonzo enyanzelekileyo emkhosini kubo bonke abemi
Imigaqo yokulawulwa kwabantu
Ukunqandwa kwamanye amaqela enkolo okanye ezopolitiko kunye nezenzo
Ukunqandwa kwanoma yiphi na indlela yokugxeka uwonke urhulumente
Imithetho equlunqwe yimapolisa yamfihlo okanye impi
Ngokuqhelekileyo, iimpawu zorhulumente wobumbano zivame ukubangela abantu ukuba babesabe urhulumente wabo. Esikhundleni sokuzama ukuphazamisa ololoyiko, abalawuli abakhohlisayo bavame ukukhuthaza nokuwasebenzisa ukuqinisekisa ukusebenzisana kwabantu.
Imizekelo yokuqala yamazwe onke aquka iJamani phantsi kukaJoseph Stalin noAdolph Hitler , kunye ne-Italy phantsi koBenito Mussolini. Imizekelo yakutshanje yamanyathelo onke aquka i-Iraq phantsi kweSaddam Hussein kunye neNyakatho Korea ngaphantsi kweKim Jong-un .
Umbuso olawulayo ubonakaliswe nguorhulumente oqinileyo ovumela abantu ukuba bafumane inkululeko engqongqo yezopolitiko. Nangona kunjalo, inkqubo yezopolitiko, kunye nayo yonke inkululeko, ilawulwa ngu rhu lumente ngaphandle komgaqo-siseko
Ngo-1964, uJan José Linz, uprofesa uEmeritus of Socialology kunye neSayensi yezoPolitiko kwiYunivesithi yaseYale, wachaza iimpawu ezine ezibonakalayo zombuso olawulayo njengo:
Inkululeko yezopolitiko emancinci kunye nolawulo oluqinileyo karhulumente olwenziwe kumaziko ezopolitiko namaqela afana namalungu omthetho, amaqela ezopolitiko kunye namaqela anomdla
Urhulumente olawulayo ozilungelelisela abantu "njengobunzima obuyimfuneko" ngokukodwa onokukwazi ukujamelana neengxaki "ezinzima ezibonakalayo" ezifana nendlala, intlupheko, okanye ugonyamelo olushushu
Imimiselo engqongqo karhulumente ekumiselwe inkululeko yentlalontle, njengokunciphisa abachasene nezopolitiko kunye nomsebenzi wokulwa nombuso
Ubukho bolawulo olulawulayo elinamandla angaqondakaliyo, aphilileyo kwaye aguqukayo
Ulawulo lolawulo olutshanje, olufana neVenezuela phantsi kweHugo Chávez , okanye iCuba phantsi kweFidel Castro , lubonisa oorhulumente bolawulo.
Nangona iRiphabhlikhi yabantu baseChina phantsi koSihlalo uMao Zedong yayicingwa njengelizwe eliqhelekileyo, i-China yanamhlanje ichazwe ngokuchanekileyo njengombuso wobunyani, kuba abemi bayo ngoku vunyelwa inkululeko ethile.
Kubalulekile ukushwankathela ukungqinelana okubalulekileyo phakathi kolawulo lwama-totalitarian kunye noorhulumente bolawulo.
Eburhulumenteni, ulawulo lolawulo lwabantu phezu kolawulo lwabantu aluphelelanga. Urhulumente ulawula phantse zonke iinkalo zoqoqosho, ezopolitiko, inkcubeko kunye noluntu. Imfundo, inkolo, ubugcisa kunye nezesayensi, kwanemilinganiselo yokuziphatha kunye namalungelo okuzala alawulwa nguorhulumente wobumbano.
Ngoxa onke amandla eburhulumenteni alawulwa ngumlawuli omnye okanye iqela, abantu bavunyelwe ukuba baninzi inkululeko yezopolitiko.
Iqashwe ngokuqhelekileyo ukususela ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi yesi-II ngowe-1945, i-fascism yindlela yoorhulumente edibanisa iinkalo ezigqithiseleyo zombini wobuqili kunye nobukhosi. Nangona xa kuthelekiswa neengcamango ezinzulu zobuzwe njengoMarxism kunye ne- anarchism , i-fascism ibhekwa njengendawo ekude ekupheleni kwezopolitiko.
I-Fascism ibonakaliswe ngokufakwa kwamandla olawulo, ulawulo loorhulumente kwishishini kunye nezorhwebo, kunye nokunciphisa ukuchaswa kweenkcaso, ngokuphindaphindiweyo ezandleni zempi okanye kumapolisa ofihlakeleyo. UFascism wabonakala kuqala e-Italy ngexesha leMfazwe Yehlabathi I , kamva wanda kwiJamani namanye amazwe aseYurophu ngexesha leMfazwe Yehlabathi II.
Ngokomlando, umsebenzi oyintloko wolawulo lwe-fascist luye lwawugcina uluntu luhlala lukulungele ukulwa nemfazwe. AmaFascist aqaphele indlela ukukhawuleza kweempi zempi ngexesha leMfazwe Yehlabathi, ndayifumanisa imida phakathi kweendima zabemi kunye nabahlaseli. Ekubeni kula mava, abalawuli be-fascist bazama ukudala isiqhelo sobuhlanga sokuba "ngummi wobukhosi" apho bonke abemi bekulungele ukulungiselela imisebenzi yempi ngexesha leemfazwe, kuquka ukulwa.
Ukongeza, i-fascists ibheka idemokhrasi kunye nenkqubo yokhetho njengesithintelo esingasigxina kwaye singadingekile ukugcina ukulungelelwa kwempi rhoqo kwaye kuthethwa ngumbuso ongeyena mnye njengento ebalulekileyo ekulungiseleleni isizwe ngemfazwe kunye nobunzima bezoqoqosho nezentlalo.
Namhlanje, oorhulumente abambalwa bazichazela ngokwabo njenge-fascist. Kunoko, eli gama lidla ngokusetyenziswa ngokugqithiseleyo ngalabo babaluleke kakhulu oorhulumente abathile okanye iinkokeli. Igama elithi "neo-fascist" lisetyenziselwa ukuchaza oorhulumente okanye abantu abathile abaxhomekeke kwizinto eziphambili zezopolitiko ezifana nezoMfazwe weHlabathi ye-II.
Iiplani zokuQala iiLayisense kwiMbali yase-US
YeVietnam yeGreat Glossary
Imbali Yenkcubeko yeSoot Suit
Biography kaSawule uAlinsky
Imbali yeSibhengezo saseBalfour
Imbali emfutshane yeKGB
Funda iMbali yeS Swastika
Funda ngeMat. Intshontsho yaseSt. Helens eyabulala abantu abangama-57
Amaqiniso Ngomkhosi WamaJapan kwiPearl Harbour
I-Tangshan: Ukuzamazama komhlaba okubi kakhulu
I-Customized New Year's Customs (i-Neujahrsbräuche)
3-Amanyathelo kwi-Ace Uvavanyo lwakho
I-Stinky Pinky Word Play
Ngokukhawuleza i-Mile Times: IiRekodi zeMad World Records
Iiprayuni eziyi-9 eziphezulu zeenqwelomoya ze-Star Wars
Isicwangciso seSifundo soSifundo se-ESL malunga nendlela yokudala uMbutho omtsha
Isikhokelo soBoniso kwiAuschwitz